2 Beresosɛm 24 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
24 Yehoas bedii ade no, na wadi mfe ason,+ na odii ade mfe aduanan wɔ Yerusalem.+ Ne maame din de Sibiya a ofi Beer-Seba.+ 2 Yehoas+ yɛɛ nea ɛteɛ Yehowa ani so,+ ɔsɔfo Yehoiada nna nyinaa mu.+ 3 Na Yehoiada waree yerenom baanu maa no, na ɔwoo mmabarima ne mmabea.+ 4 Akyiri yi, ɛbaa Yehoas komam sɛ onsiesie Yehowa fie no.+ 5 Enti ɔboaboaa asɔfo+ ne Lewifo no ano na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔ Yuda nkurow mu nkogyigye sika wɔ Israel nyinaa mfa nsiesie+ mo Nyankopɔn fie no afe afe;+ munni asɛm yi ho dwuma ntɛm.” Nanso Lewifo no anyɛ no ntɛm.+ 6 Ɛnna ɔhene frɛɛ ɔpanyin Yehoiada, na obisaa no sɛ:+ “Tow kronkron a Yehowa akoa Mose hyɛe+ sɛ Israel asafo ntua wɔ Adanse+ ntamadan no ho no, dɛn nti na wonhwɛ mmaa Lewifo no nnyigye mfii Yuda ne Yerusalem mmae? 7 Hwɛ, Atalia, ɔbea omumɔyɛfo no mma+ abɔ awura nokware Nyankopɔn fie+ hɔ, na nneɛma kronkron+ a ɛwɔ Yehowa fie no, wɔasesaw ne nyinaa de akɔbɔ afɔre ama Baal+ anyame.” 8 Ɛnna ɔhene kae ma wɔyɛɛ adaka+ de sii Yehowa fie kwan ano. 9 Na ɛno akyi no, wɔkae wɔ Yuda ne Yerusalem nyinaa sɛ obiara mmetua Yehowa tow kronkron+ a nokware Nyankopɔn akoa Mose kae wɔ sare so sɛ Israelfo ntua+ no. 10 Na mpanyimfo+ ne ɔman no nyinaa dii ahurusi,+ na wɔde tow no beguu adaka+ no mu kosii sɛ obiara de ne de bae. 11 Sɛ bere sõ a, wɔma Lewifo no de adaka no bɛhyɛ ɔhene nsa,+ na sɛ wohu sɛ sika pii aba mu+ a, ntɛm ara ɔhene kyerɛwfo+ ne ɔsɔfo panyin boafo ba behwie adaka no mu sika na wɔma so san de kosi nea esi. Saa na wɔyɛe daa, na wonyaa sika bebree. 12 Na ɔhene ne Yehoiada nso de maa adwumayɛfo+ a wɔyɛ Yehowa fie adwuma+ no, na wɔde bɔɔ abopaefo+ ne adwumfo+ paa sɛ wɔmfa nsiesie Yehowa fie+ no. Wɔde bi nso bɔɔ dade ne kɔbere adwumfo paa sɛ wɔmfa nsiesie Yehowa fie+ no. 13 Na adwumayɛfo no hyɛɛ adwuma no ase,+ na ɛhɔ asiesie no nyaa nkɔso wɔn nsam, na wɔmaa nokware Nyankopɔn fie no gyinae sɛnea ɛsɛ, na enyaa ahoɔden. 14 Wowiee adwuma no ara na wɔde sika no nkae brɛɛ ɔhene ne Yehoiada, na wɔde yeyɛɛ Yehowa fie anwenne, ɔsom ne afɔre anwenne+ ne nkuruwa+ ne sika+ ne dwetɛ anwenne; wɔbɔɔ ɔhyew afɔre+ wɔ Yehowa fie hɔ da biara wɔ Yehoiada nna nyinaa mu. 15 Na Yehoiada bɔɔ akora, na nna mee no,+ na owui; owui no na wadi mfe ɔha aduasa. 16 Wosiee no Dawid Kurow mu kaa ahene no ho,+ efisɛ ɔyɛɛ adepa wɔ Israel,+ nokware Nyankopɔn som ne ne fie no ho. 17 Yehoiada wui no, Yuda mpanyimfo+ ba bɛkotow ɔhene, na saa bere no, ɔhene tiee wɔn.+ 18 Wɔde nkakrankakra gyaw wɔn agyanom Nyankopɔn Yehowa fie, na wɔkɔsom abosonnua+ ne ahoni,+ na wɔn mmarato no nti, abufuw baa Yuda ne Yerusalem so.+ 19 Yehowa somaa adiyifo+ baa wɔn mu sɛ wɔnsan mmra ne nkyɛn; wɔkasa kyerɛɛ wɔn daa, nanso wɔantie.+ 20 Ɛnna Onyankopɔn honhom+ baa+ ɔsɔfo Yehoiada+ ba Sakaria+ so na ɔforo kogyinaa ɔman no anim, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Nea nokware Nyankopɔn aka ni, ‘Dɛn nti na mubu Yehowa mmara nsɛm so ma enti ɛrensi mo yiye+ yi? Moagyaw Yehowa, enti ɔno nso begyaw mo.’”+ 21 Ɛnna wɔbɔɔ ne ho pɔw,+ na ɔhene hyɛe ma wosiw no abo+ Yehowa fie adiwo. 22 Enti adɔe a ne papa Yehoiada yɛɛ Ɔhene Yehoas no, wankae,+ na okum ne ba no. Bere a ɔrewu no asɛm a ɔkae ne sɛ: “Yehowa nhwɛ na ontua so ka.”+ 23 Afe no soe+ no, Siria+ asraafodɔm baa no so+ na wɔbaa Yuda ne Yerusalem bɛsɛee ɔman no mu mpanyimfo+ wɔ nnipa no mu, na wɔde asade a wɔfae nyinaa kɔmaa Damasko+ hene. 24 Asraafo kakraa bi na Siriafo de wɔn bae,+ nanso wɔn agyanom Nyankopɔn Yehowa a wɔagyaw no nti, Yehowa de asraafodɔm kɛse hyɛɛ wɔn nsa,+ na Yehoas nso, wɔde atemmu baa no so.+ 25 Bere a wofi ne nkyɛn kɔe no (wogyaw no nyarewa pii),+ n’ankasa ne nkoa bɔɔ ne ho pɔw,+ ɔsɔfo Yehoiada mma+ no mogya+ nti; wokum no ne mpa so, na owui.+ Na wosiee no Dawid Kurow+ mu, nanso wɔansie no ahene amusiei hɔ.+ 26 Eyinom na wɔbɔɔ ne ho pɔw no: Ammonni bea Simat ba Sabad+ ne Moabni bea Simrit ba Yehosabad. 27 Ne mma ne nsɛm pii a wɔka tiaa no+ ne nokware Nyankopɔn fie no ho adwuma+ nyinaa, wɔakyerɛw wɔ Ahene Nhoma+ no mu. Na ne ba Amasia+ bedii n’ade.
2 Beresosɛm 24